Dihy « kizomba » : namiratra ny Malagasy tatsy La Réunion | NewsMada
Dihy « kizomba » : namiratra ny Malagasy tatsy La Réunion
Par Taratra sur 17/10/2017
Voaporofo hatrany fa mahay mandihy ny Malagasy. Tsy eto an-toerana ihany fa hatrany amin’ny sehatra iraisam-pirenena, samy maneho izany avokoa. Santionany ny zava-nisy tatsy amin’ny Nosy La Réunion.
I Roddy sy i Geneviève, tanora avy any Antsiranana, mpandihy dihin’olon-droa. Izy ireo no nandrombaka ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanana dihy « kizomba », natao tany La Possession, Nosy La Réunion, ny 13 oktobra lasa teo. Reonioney ny faharoa (i Ginot sy i Dana) ary mbola Malagasy avy any Toamasina, i Elysée sy i Ludmilla, kosa ny nahazo ny laharana fahatelo. Araka izany, namirapiratra ny mpandihy malagasy.
« Kiz with me show » ny lohatenin’izany fifaninanana izany ary efa andiany faharoa ny tontosa tamin’iny herinandro iny. Mikarakara ny hetsika ny fikambanana antsoina hoe Vien Bougé. Ankoatra ny fifaninanana dihy, nanafana ny fotoana, tamin’io alin’ny 13 oktobra io, ny dihin’olon-droa samihafa, toy ny salsa, bachata ary kizomba.
Marihina fa karazan-dihy, iarahan’olon-droa, mahazo vahana sy be mpankafy maneran-tany ny « kizomba », izay karazan-dihy avy any Angola. Ny mampiavaka azy, zara raha misy elanelana ny vatan’ireo mpandihy roa. Toy ny mifampiraikitra mihitsy aza, saingy malefaka sy afaka miara-mihetsika. Malefaka sy miadana kokoa, noho ny dihy hafa, ny fihetsiky ny rantsam-batana, rehefa mandihy « kizomba ». Niainga avy amin’ny dihy antsoina hoe « semba », ahitana fihetsika haingana sy mahery vaika kokoa, ity karazan-dihy efa mihamalaza eto amintsika ity.